तपाइलाइ हामीले दिएको SLC Result अहिले पनि कसरी हेर्ने भनेर थाहाँ छ ? छैन भने हेर्नुहोस् । ~ Arjel's Diary
तपाइलाइ हामीले दिएको SLC Result अहिले पनि कसरी हेर्ने भनेर थाहाँ छ ? छैन भने हेर्नुहोस् ।
यसमा वि.स.२०५७ साल देखि वि.स. २०७२ साल सम्ममा SLC दिएका विद्यार्थीहरुको मार्कशिट हेर्न मिल्छ जसमा तपाइले आफ्नो SLC दिदाको सिम्बोल नम्बर र जन्ममिति अनि SLC दिएको साल राखेर Marksheet Verify गर्नसक्नु हुनेछ ।
नतिजा Verify गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।